तिलिचो उडेका ६ हेलिकप्टर लमजुङमा आकस्मिक अवतरण
लमजुङ-तिलिचो भ्रमणका लागि पर्यटक लिएर उडेका ६ वटा हेलिकप्टर लमजुङको सदरमुकाम बेसीशहरमा आकास्मीक अवतरण भएका छन् । मनाङस्थित तिलिचो ताल अवलोकनका लागि भारतीय पर्यटक लिएर उडेका ६ वटा हेलिकप्टर बेसीशहरमा आकास्मीक अवतरण भएका हुन् ।
संसारकै सबैभन्दा उचाईमा रहेको तिलिचो ताल अवलोकनका लागि ३१ जना भारतीय पर्यटक लिएर विभिन्न कम्पनीका ६ वटा हेलिकप्टर काठमाडौंबाट मनाङ उडेका थिए । तर, निरन्तर वर्षाका कारण मनाङमा मौसम खराव भएपछि सवै हेलिकप्टर लमजुङ सदरमुकाम बेसीशहरमा अवतरण भएका हुन् ।
मंगलबार विहान ९ वजेदेखि मनाङतर्फ उडानको प्रयास गरेपनि लमजुङको माथिल्लो भाग देखिनै मौसम अनुकुल नहुँदा उडान हुन सकेको थिएन । मध्यान्ह १२ः३० वजेतिर लमजुङको मौसममा केही सुधार आएपछि मनाङतर्फ उडेका ६ वटै हेलिकप्टर पुनः मनाङको नासोङ–१, तालमा अवतरण भएका थिए ।
नासोङ गाउँपालिका अन्तर्गत दानक्यु माथिको आकाशसम्म पुगेर मौसम अनुकुल नभएपछि पुनः तालगाउँ फर्किएर अवतरण भएको सिम्रिक एयरलाईन्सका पाईलट क्या. सिद्धार्थ गुरुङलाई उधृत गर्दै मनाङका प्रहरी प्रमुख टीकाबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । मौसम प्रतिकुल नभएपछि बेसीशहरमा अवतरण भएको उनीहरूलाई मनाङ प्रशासनले नै माथि नआउन आग्रह गरेको थियो । सदरमुकाम चामे भन्दा माथिको मौसम झनै अनुकुल नभएकोले जोखिम मोलेर माथि नजान आग्रह गरेको मनाङका प्रमूख जिल्ला अधिकारी रुद्रनाथ देवकोटाले बताए ।
“अहिले मौसम ठिक छैन, चामे भन्दा माथि जानसक्ने अवस्थानै छैन” प्रजिअ देवकोटाले भने “यस्तो जोखिममा मुर्खता नगर्न आग्रह गरेका छौँ ।”
हाल अमेरिका बस्दै आएका भारतीय मूलका पर्यटकहरू आफ्नो परम्परागत पुजाको लागि तिलिचो जान आएको बुझीएको छ । गण्डक नदीको मुहान तिलिचो र मुस्ताङको मुक्तीनाथ प्रति आस्था गर्ने उनिहरूले तिलिचो पुग्न नसकेपछि तालस्थित मस्र्याङदी किनारमा पुजा गरी फर्किएको मनाङ प्रहरीले जनाएको छ ।
भारतीय पर्यटक लिएर सिम्रिक एयरका ३ वटा, श्री एयरलाइन्सको १, मनाङ एयरलाईन्सको १ र अल्टिच्युट एयर कम्पनीको १ गरी ६ वटा हेलिकप्टरमा ३१ जना भारतीय पर्यटक आएका सिम्रिक एयरलाईन्सका पाईलट क्या. प्रकाश सेढाईले जानकारी दिए ।